QODOBBADA WAXTARKA LEH EE FEERAHA: SIDA LOO ISTICMAALO GEEDKA DAAWADA DHAQAMEED - DAAWADA DADWEYNAHA
Waxyaalaha waxtarka leh iyo bogsashada sifooyinka lidka ku ah
Chervil waxaa loo yaqaanay dhulkeenna illaa iyo waqtiyadii hore waxayna ku magacaabeen cunto fudud, karbel, kupyr. Waxaa loo adeegsaday cuntada iyo sida daaweynta. Maanta, dhirta ayaa sii waddaa in lagu isticmaalo daawada dhaqameed iyo karinta, laakiin sifooyinka faa'iidada leh waxay heleen codsi ku saabsan meelaha kale ee nolosha dadka.
Chervil (kupyr): Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada ee geedka
Chervil markasta waa la ogaan karaa dhirta kale. Waxay gaadhaysaa qiyaas ah 70 cm waxayna leedahay dheer, qumman oo jeexjeexan oo leh caraf udgoon. Caleemaha waa siman, lakulma, marmarka qaarkood, waxay leeyihiin madow cagaaran.
Ubaxyada dhirta waa caddaan ama casaan. Duufaannada waxaa loo qaabeeyey sida dalladaha dillaalka ah. Muuqaal kale oo muuqaal ah oo dhirta ka mid ah - ma jilcin ilaa bartamaha-bartamaha.
Herb Chervil wuxuu ku jiraa cusbada macdanta, glycosides, fiitamiinada A iyo C, rutin, borotiin, noocyada kala duwan ee micro iyo macro. In daawada dad, geedka waxaa lagu qiimeeyaa content sare ee fitamiin A, iyo sidoo kale carotenoids, kuwaas oo ah antioxidants xoog leh.
100 g geedka waxaa ku jira:
4740 mg of potassium;
1346 mg oo ah kalsiyum;
83 mg of sodium;
31.95mg oo bir ah;
450 mg oo ah fosfooraska;
29.3 mcg of selenium;
0.44 μg naxaas;
5850 mg oo fitamiin A ah;
1.99 mg oo fitamiin B ah;
50 mg oo fitamiin C ah;
11.3 g ee fiyuusta cuntada;
7.2 garaam oo ash.
Chervil waxay leedahay qiimaha qiyaasta 237 kcal halkii 100 g oo ah sheyga.
Qodobbada faa'iidada leh ee lafiirta sida loo isticmaalo daawada dhaqameed
Si joogto ah cunta kupyr cunto, waxaad hagaajin kartaa dheef-shiid kiimikaad, ka saar dufanka xad-dhaafka ah, hagaajinta xusuusta iyo niyad-jabka niyad-jabka. Markii hore, dhakhaatiirta dhaqameed waxay u adeegsadeen sida soo saaraha, duriinka, oo leh hindhiso dheerad ah, tufaax iyo saameyn kicin leh.
Shaqada furan wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo faa'iido leh. Waxay ka caawisaa in ay caadi u noqoto cadaadiska dhiigga, saameyn togan ee habka wadnaha iyo xididada jirka. Saameyn wanaagsan oo ku saabsan shaqada kelyaha, xubnaha neefta.
Ma taqaanaa? Dhaqdhaqaaqa Europe waxaa loo tixgeliyaa warshad beeran, kaas oo la cuno gaar ahaan diyaarka France. Dhibaatooyinkayaga aad dhif u ah ayaa la kulmi kara. Xayawaankan duurjoogta ah, oo aan ugu yeerno Chervil, dhab ahaantii waa qaraabo fog. Dareemaha qunyar-socodka ah ayaa laga heli karaa Crimea, qaybta koonfureed ee Ruushka, ee Caucasus, waxaa laga helaa Bartamaha Aasiya, Turkiga, Iran, iyo Ciraaq.
Codso juice farsamo cusub
Xumbada waxaa loo isticmaalaa qaabab kala duwan, casiirkiisu wuxuu leeyahay waxyaabo faa'iido leh, kaas oo loo isticmaalo sida faa iido badan. Isticmaal cabitaan saafi ah, laakiin xalkeeda.: 30-50 dhibcood oo ah badh koob oo biyo ah. Cabbitaanka cuntada ka hor saddex ilaa afar jeer maalintii. Xalka noocan oo kale ah ma aha oo kaliya in uu la dagaallami karo qufaca, laakiin sidoo kale xoojinta nidaamka difaaca, waa in la nadiifiyaa dhiigga.
Juice cusub Chervil wuxuu awoodaa inuu la dagaallamo cudurrada maqaarka sida scrofula, lichen. Waxay ka caawisaa in bogsashada nabarrada aan dib loo dhigin muddo dheer. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa caabuqa qanjidhada.
Sida loo sameeyo decoction of fareebka
Wixii karinta maraq Laba qaado oo ka mid ah caleemaha dhirta ayaa laga soo qaaday koobabka oo la karkariyey 15 daqiiqo 0.5 litir oo biyo ah. Marmarka qaarkood waxaa lagula talinayaa in lagu daro malab si uu u noqdo decoction. Haddii aad sidan oo kale u diyaarisay Cerville, su'aasha ayaa soo baxaysa: sida loo qaato. Qiyaasta lagu taliyey waa nus dhan saddex jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Awowayaasheen ayaa muddo dheer ogaa sifooyinka bogsashada ee kufsiga iyo si firfircoon u isticmaalaan cuduro kala duwan, oo waxay ku darsadeen cuntada sidii tallaabo ka hortag ah. Laakiin sidoo kale waxay samaysay khamri aad u fiican - dhadhan fiican leh, dabcan, caafimaad leh.
Xumad ee foomkan ayaa faa'iido u leh gout, cudurrada beerka, cudurrada dumarka, oo ay ku jiraan xilliga menopause. Dibadda waxaa loo isticmaalaa daaweynta edema, arthritis, boils, boon. Caleemaha la jajabiyay waxay caawiyaan nabarrada bogsata.
Waa maxay faa'iido ka soo shaah sheel
Caleenta dhirta waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo shaaha daawada, taas oo ay weheliso tayada jidhka, waxay dejisaa habka dhexe ee dareenka. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la cabbo xaaladaha niyadjabsan, ee ka hortagga muruqyada, iyo xanuunada kala duwan ee dareenka. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay saameyn togan ku leh mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Sidee loo isticmaalaa faleebo feeraha
Mishiinka tincture lagugula taliyay miisaan lumis. Waxay ka caawisaa in laga takhaluso boogaha dheeraadka ah ee ugu badbaado badan. Si aad u diyaariso, ku shub laba qaado oo caleemo qallalan oo dhir ah oo leh dhalo biyo ah. Ku adkee ugu yaraan saacad. Qaado cunto ka hor 30 daqiiqo, 50 ml seddex ilaa afar jeer maalintii.
Codsiga saliid muhiim ah
Abuurka geedka ayaa hodan ku ah saliida lagama maarmaanka ah. Waxaa laga helaa fuuq-uumeysiga miraha. Waxaa loo isticmaalaa karinta wax soo saarida wax soo saarka hilibka, iyo sidoo kale soo saarida khamriga aan khamriga ahayn iyo khamriga.
Marka guriga la joogo, saliidda shubanka laguma talinayo. Waxaa ku jira kiimikada kansarka iyo sunta kiimikada, methylcavicol. Iyada oo isticmaalka khalad ah ee saliidda, waxaad ka heli kartaa saamaynta soo horjeeda ee daaweynta.
Isticmaalka dhuunta nafaqada
In dietetics, dhirta waxaa inta badan loo isticmaalaa in laga saaro sunta jirka, dhaqaajiso dheef-shiid kiimikaad, iyo siin jilitaanka guud jirka ah. Marka hore jirka ayaa nadiifinaya Sababtoo ah saameynta duriinka - Waxay ka saartaa biyaha xad-dhaafka ah, oo leh, sunta, waxay ku nadiifisaa beerka.
Maadaama mishiinka uu heysto qadar qani ah kiimikooyin, waxa uu jidhka ku darsadaa walxo waxtar leh iyo walxaha noolaha firfircoon, waxay hagaajinayaan geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka ah, waxana uu hagaajiyaa hawlaha ilaalinta jidhka. Saameyntani waxay si fiican u dareemeysaa guga. Isticmaalka joogtada ah ee faafinta inta lagu jiro muddadan, ma aha oo kaliya dhacdooyinka, laakiin miisaankuna wuu yareeyaa.
Sidee loo adeegsadaa feerka qamiisiga
Warshadu waxay heshay codsigeeda cosmetology. Waxyaabaha laga soo saaro waxay ku jirtaa qayb ka mid ah kiriimyada kala duwan, gaar ahaan kuwa loogu talagalay inay daryeeli maqaarka dhibaatada. Wakiilada noocan oo kale ah ayaa lafdhabar u ah maqaarka iyo lakabyada hoose ee maqaarka, waxay leeyihiin saameyn ku daweyn.
Mishiinka iyo karinta
Maaddaama uu dhadhanka macaan ee macaan, dhirta ayaa muddo dheer loo adeegsaday karinta cuntada. Dhirta cagaaran ee cusub ayaa loo isticmaalaa diyaarinta suugada kala duwan, saladh oo leh boqoshaada, maraqa guga iyo maraqa, suxuunta digaaga, kalluunka, wanka, ukumaha.
Waxay si fiican u isku dhafan tahay digirta. Mararka qaar ujeeddooyinkani waxay qaadaan xididka geedka. Cagaarka cusub ayaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo suxuun, sanduuqyada. Haddii aad isku daraysid geedo aad jarjartey subagga ama farmaajada, waxaad samayn kartaa faafin suugaan leh.
Waa muhiim! Greens ee suxuunta waxaa lagu daray macno ahaan ka hor inta adeegaya. Haddii ay la socoto daaweynta kulaylka, waxay lumisaa inta badan dhadhanka iyo carafka.
Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaalaa diyaarinta khal iyo khudradda khamriga. Si arrintan loo sameeyo, ku dar geedo yar yar oo dhirta ku jirta dhalada. Waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu daro dhir kale. Waxa la rumaysan yahay in walxaha dabacsan ee aromaticka laga helo ay la jiraan basil iyo dhir.
Cerville waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho oo keliya cusub, inkastoo aad ka heli karto foomka la qalajiyey. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta khubarada ah waxay ku shaqeeyaan dhogorta qalalan ee kufsiga, iyo sidoo kale pickling ama dhirta caleemaha iyo afkoda. Laakiin waxaa la rumaysan yahay in ka dib markii sida ka dib, sida iyo sidoo kale ka dib markii lagu keydiyo, waxay lumisaa saamiga weyn ee dhadhan.
Waa muhiim! Xumbada waxaa loo isticmaalaa maaha oo kaliya daawada dhaqanka iyo karinta. Isagu waa dagaalo waaweyn cayayaanka kala duwan. Haddii aad ballaariso caleenta cagaaran meelaha ay inta badan ku ururaan, carafka dhirta ayaa ka cabsi galin doonta, wayna joojin doonaan inay halkaa ka muuqdaan.
Gacmaha: sida loo diyaariyo loona kaydiyo alaabta ceeriin caafimaad
Si Chervil looga dhigo waxtarkeeda oo aan waxyeello keenin, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo diyaariyo. Ujeedooyinka daawooyinka, isticmaal xididka iyo caleemaha geedka.
Goynta xididku wuxuu dhacaa xilliga dayrta. Waxaa la qodayaa oo dhaqday dhulka, la nadiifiyey, googooyaa oo la qalajiyey foornada ama qalajiyaha. Ku kaydi xididka waxaa lagu taliyaa sanduuqyada alwaax. Xasuuso in ka dib labo sanno oo keyd ah, waxay lumin doontaa alaabta faa'iidada leh.
Caleemaha, dhinaca kale, waxaa la goostay bilowga xagaaga, ka hor ubaxyada dhirta. Waxay kaloo u baahan yihiin in la dhaqo oo la qalajiyo. Laakiin qalajinta ayaa ka dhacda xaaladaha dabiiciga ah, oo ka fog jidka qorraxda tooska ah ee qorraxda, gaar ahaan hooska.
Xaqiiqo goosan oo sidan ah caleemaha looma isticmaalo karinta. Ka dib qalajinta, waxay luminayaan inta badan dhadhanka iyo dhadhanka. Isla arrimahan ayaa dhacaya iyadoo lagu keydinayo geedka. Ujeeddooyinka culeyska, waxa ugu wanaagsan in lagu hayo qaboojiyaha mugga miro ama qaboojiyaha biyaha qabow.
Waa muhiim! Geeddi daaweynta ugu faa'iido badan Chervil goosashada guga. Markuu geedka kiciyo oo si firfircoon u soo saaro caleemaha yar yar, waa in si tartiib tartiib ah looga gooyaa, ha u oggolaanin warshadda inay sii daayo asliga ah. Markaas baadiyaha si joogto ah u siin doonaa caleemo cusub oo laga saari karo dhammaan xagaaga. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo diyaargarow sanad gudihii. Muddadan ka dib, waxay luminayaan hantidooda daawada.
Gacalis: ma jiraan wax khilaaf ah
Iyada oo adeegga warshadda noocan oo kale ah, su'aasha macquul ah ayaa soo baxday: miyuu Chervil ka horjoogsadaa inuu isticmaalo? Kaligeed, dhirta waa sun aan suntan lahayn oo hubaal ah in la cuno. Dhibaatooyinka waxay ku dhici karaan oo keliya marka loo eego dulqaadka shakhsi ahaaneed. Daryeelka waa in la qaataa si uu u isticmaalo saliid shinni ah, sababtoo ah wuxuu ku jiraa qaabkan in koklear uu yahay sun.
Waa inay aad u taxaddaraan marka la goynayo dhirta. Dhanka kale, waxay aad ugu egtahay xargaha, taas oo ah sun. Sidaa darteed, haddii aadan kalsooni ku qabin aqoontaada, waxaa fiican inaad iibsato horay loo diyaariyey Chervil.
Chervil waa warshad hodan ku ah vitamiin iyo walxo kale oo faa'iido leh. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu qiimeeyaa dhadhan iyo caraf udgoon. Waxa aan loo isticmaalin oo keliya daaweynta cuduro kala duwan, laakiin sidoo kale in lagu karsado, iyo mararka qaarkood ee kondomoole. Laakiin si loo helo saameynta la filayo, waxaa muhiim ah in la ogaado qaybo ka mid ah warshadda in la goosho muddadaas.